Gegida dayuuradaha ee caanka ah ee Hawaii ayaa heshiis kiro oo dheeri ah ku leh nolosha rayidka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Gegida dayuuradaha ee caanka ah ee Hawaii ayaa heshiis kiro oo dheeri ah ku leh nolosha rayidka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Entertainment • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Qareennada u dagaallamaya badbaadinta Dillingham Airfield, oo ah garoon diyaaradeed guud oo caan ah oo ku yaal Waqooyiga Shore ee Oahu, waxay u dabbaaldegeen guul la taaban karo dagaalkii muddada dheer socday markii Waaxda Gaadiidka ee Hawaii ay ka noqotay ogeysiiskeedii ahaa in la joojiyo heshiiska kirada, 31-kii Diseembar, ee dhulka oo ka socda Ciidanka Mareykanka.
Kawaihapai Airfield oo ku taal Oahu, Hawaii, oo sidoo kale loo yaqaan Dillingham Airfield waa soo jiidasho dalxiis oo caan ah.
Dillingham Airfield, oo loo adeegsado fuulitaanka barafka, cirka cirka iyo casharrada duulimaadka, ayaa halis ugu jira in la xiro.
Dib -u -dhigista ugu dambaysa waxay iibsataa waqti aad u badan - sannado halkii ay ka ahaan lahayd bilo - si loo xalliyo qorshaha mustaqbalka madaarka caanka ah.
Milkiilayaasha Diyaaradaha iyo Ururka Duuliyeyaasha (AOPA) Taageero ballaadhan oo loogu talagalay Dillingham Airfield (oo sidoo kale loo yaqaan Kawaihāpai Airfield) waxyar ka dib markii Hawaii DOT ay u xaqiijisay AOPA bishii Abriil 2020 inay u dhaqaaqi doonto inay joojiso kiraynta hantida gegida diyaaradaha ee Ciidanka Mareykanka kahor heshiiskaas 2024 -ka.
Gobolka Hawaii wuxuu ku amray kiraystayaasha inay banneeyaan gegida dayuuradaha ee muddada dheer loo adeegsan jiray tababarka duulimaadka, barafka, indho -indhaynta, iyo hawlgallada dhaldhalaalka leh, taasoo halis gelisay meheradaha iyo ilaha dalxiiska.
AOPA Maareeyaha Gobolka Galbeedka Baasifigga Melissa McCaffrey ayaa hoggaamisay dadaalka “u-doodista A-kooxda” si loo helo taageero maxalli ah, oo gacan ka geysata dhisidda olole dhinacyo badan leh, kaas oo taageero ka dhex helay xildhibaannada oo ay ku biireen in ka badan 450 qof, iyagoo kasbaday baahinta warbaahinta maxalliga ah ee arrin. Taageerayaashaas dhexdooda, Wakiilka Maraykanka Kai Kahele (D-Hawaii) ayaa ku boorriyay Gov. David Ige in uu sii wado isticmaalka rayidka ee garoonka dayuuradaha 3-da Maarso.
Kahele wuxuu ammaanay go'aanka DOT (oo lagu dhawaaqay warqad 17 -kii Sebtember) si looga noqdo ujeeddadiisii ​​ahayd joojinta hore ee kiraynta dhulka bayaan laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ah ee ku saabsan horumarinta:
"Go'aanka Hawai'i DOT ee ah in laga noqdo ogeysiiska hore ee joojinta heshiiskii ay la gashay Ciidanka ayaa u oggolaanaya wada -hadal joogto ah oo aad loogu baahan yahay oo ku saabsan mustaqbalka garoonka Kawaihāpai (Dillingham). Tan iyo markii aan xafiiska qabannay, aniga iyo shaqaalahaygu waxaan samaynay dadaal wadajir ah si aan u helno xalal fog oo loogu talagalay dayactirka socda iyo hawlgallada si kor loogu qaado kartida Kawaihāpai, ”ayuu yiri Kahele.
"Airfield waa darawal dhaqaale oo muhiim u ah Waqooyiga Shore wuxuuna u adeegaa xarun xudun u ah duuliyeyaasha maxalliga ah iyo sidoo kale duulista guud, iyo bulshooyinka cirka."
Sharci -dajiyayaasha gobolka ayaa sidoo kale ku biirey riixitaanka badbaadinta, iyaga oo farsameynaya biil taageero xoog leh ka helay AOPA oo McCaffrey ku caddeeyay marqaatigii la bixiyay bishii Febraayo, isagoo ka dhigaya kiis sii wadista adeegsiga rayidka ee gegida dayuuradaha oo bixisa $ 12.6 milyan oo ah faa iido dhaqaale oo toos ah isla markaana soo jiidanaysa 50,000 oo booqde sanadka halka ay shaqaalaysiinayaan 130 qof 11 meheradood oo ku salaysan madaarka.
The FAA ayaa sidoo kale ku boorriyay gobolka inuu dib uga fiirsado ka saarida kiraystayaasha Dillingham Airfield warqad 1-dii Febraayo u diray saraakiisha gegida dayuuradaha ee gobolka, isagoo ugu baaqay gobolka inuu dib u dhigo joojinta kirada ee la qorsheeyay xilligaas oo ahayd 30-ka Luulyo ayna xusuusiso gobolka waajibaadka deeqda federaalka. AOPA waxay si dhow ula shaqaysay Sen. Gil Riviere (D-District 23) iyo Wakiilka gobolka Lauren Matsumoto (R-District 45), Ururka Parachute United States, iyo sidoo kale hogaamiyayaasha kooxda u doodista deegaanka ee Save Dillingham Airfield si ay uga dhaadhiciyaan DOT si loo kordhiyo adeegsiga Dillingham oo ah garoon diyaaradeed oo rayid ah. Kooxda sii kordheysa ee taageerayaasha ayaa niyad jabtay markii joojinta heshiiska kirada ee 30-ka Juun la kordhiyay oo kaliya illaa December, laakiin waxay cadaadiska ku haysay waqti dheeraad ah si loo sameeyo xal waara oo waara.
Sida laga soo xigtay McCaffrey, “Tani waxay ka nasanaysaa joojinta hore ee heshiiska kirada ee Dillingham (Kawaihapai) Airfield waxay siineysaa daneeyayaasha fursad aad u wanaagsan si ay xal ugu helaan dhibaatooyinka jira, iyo tan ka sii muhiimsan, waxay fureysaa albaabka si loo aasaaso aasaaska GA firfircoon oo koraya bulshada sanadaha soo socda. ”
Dillingham Airfield waxay leedahay xididdo milatari, markii loogu yeeri jiray Mokuleia Airstrip markii ay dhiseen Ciidanka Mareykanka toban sano ka hor Disembar 7, 1941, weerarkii Pearl Harbor, markii dhowr duuliye oo ka yimid garoonka diyaaradaha ee Waqooyiga Shore ay awoodeen inay bilaabaan oo ka hortagaan weerarka. Runway -ga ayaa markii dambe la kordhiyay, waxaana garoonkii diyaaradda loo beddelay Saldhigga Ciidanka Cirka ee Dillingham 1948 -kii si loogu maamuuso Capt. Henry Dillingham, oo ahaa duuliye B -29 oo lagu dilay ficil intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka.